Dhirta quraaradda | Kalluunka
ka dhirta aquarium Iyagu waa hal shey oo qurxin ah oo ay tahay inaan tixgelinno. Gaar ahaan haddii aan dooneyno inaan ku dhigno aquarium-keena, maxaa yeelay waa inaan ogaanaa faahfaahinta mararka qaarkood aan la dareemin taas oo adkayn karta xasilloonida aquariumkeenna badan.
Waa sidaas dhirta aquarium waxay noqon kartaa xulafo ama cadowXaaladaha qaarkood, waa inaan raacnaa nidaamka la-qabsiga aquarium-keena, si aanan u nijaasayn biyaha oo aan dhibaatooyin u siinin.
Goobtan waxaad ka heli doontaa, noocyada dhirta, tilmaamaha lagu soo bandhigi karo quraaradda quraaradda iyo faahfaahin aan dhammaad lahayn oo aan si buuxda ugu raaxeysanno gurigeenna iyo kalluunkeennu inuu ku raaxeysto aquarium-kooda. Waa muhiim inaad tixgeliso faahfaahin kasta si aad u daryeesho xoolaheena.
Qormooyinkii hore waxaan si qoto dheer ugu eegnay algae cas. Maanta waxaan kuu keenaynaa maqaal kale oo la xiriira. Kiiskan…
Maanta waxaan ka hadli doonnaa dhir si ballaaran loogu isticmaalo aquariums-ka. Waa jajabkii Java. Magacaaga…
Qurxinta iyo abuuritaanka deegaan kalluunkeena waxaan u isticmaali karnaa dhirta dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ah labadaba. By…
Dhirta biyoodka ayaa ka badan uun sheyga qurxinta. Iyagu waa noole, sidaa darteedna waxay u baahan yihiin xoogaa ...
Dhirta sabeynaya aquariums-ka
Dhirta sabeynaya, marka laga reebo inay qurxin ku dhex yihiin aquarium-yada, waxay sidoo kale cunto siin karaan noocyada kalluunka qaarkood ...
Meelo badan oo biyo ah oo aan u imid inaan ku arko noloshayda, dhirta biyaha ku dhex nool ee ku dhex nool, waxay ...